China okuzenzakalelayo Bottom Ukugcwalisa Ukupakisha Machine Model SPE-WB25K abakhiqizi futhi abahlinzeki | Shipu Imishini
Umshini wokupakisha othomathikhi ungabona ukukala okuzenzakalelayo, ukulayishwa kwesikhwama okuzenzakalelayo, ukugcwaliswa okuzenzakalelayo, ukufaka uphawu kokushisa okuzenzakalelayo, ukuthunga nokugoqa, ngaphandle kokusebenza ngesandla. Gcina izinsiza zabantu futhi unciphise utshalomali lwezindleko zesikhathi eside. Isetshenziswa kakhulu emikhiqizweni yezolimo, ekudleni, kokuphakelayo, embonini yamakhemikhali, efana nommbila, imbewu, ufulawa, ushukela nezinye izinto ezisetshenziswa kahle.
Umshini wokupakisha othomathikhi ungabona uchungechunge lwemisebenzi njengokulinganisa okuzenzakalelayo, ukulayishwa kwesikhwama okuzenzakalelayo, ukugcwaliswa okuzenzakalelayo, ukufaka uphawu kokushisa okuzenzakalelayo nokuthunga, ngaphandle kokusebenza ngesandla. Gcina izinsiza zomuntu futhi wehlise okokufaka kwezindleko zesikhathi eside. Ingabuye igcwalise wonke umugqa womhlangano neminye imishini esekelayo. Isetshenziswa kakhulu emikhiqizweni yezolimo, ukudla, okuphakelayo, izimboni zamakhemikhali, njll., Njengezinhlamvu zommbila, imbewu, ufulawa, ushukela omhlophe nezinye izinto ezinokupakisha okuhle okusamanzi.
Umshini onesisindo usebenzisa okuphakelayo okukodwa okuqondile, okwakhiwa isikulufa esisodwa. Isikulufu siqhutshwa ngqo yimoto ye-servo ukuqinisekisa ukushesha nokunemba kwesilinganiso. Lapho usebenza, isikulufa sizungezisa futhi sondle okokusebenza ngokuya ngesiginali yesilawuli; inzwa enesisindo kanye nesilawuli esinesisindo senza inqubo yesiginali enesisindo, bese kukhipha isibonisi sedatha yesisindo nesiginali yesilawuli.
Umshini onesisindo usebenzisa ukuphakelwa okukodwa okuqondile, okwakhiwa ngesikulufa esisodwa.Isikulufu siqhutshwa ngqo yi-servo motor ukuqinisekisa ukushesha nokunemba kwesilinganiso.Uma usebenza, isikulufa sijikeleza futhi siphakela ngokuya ngesignali yokulawula; inzwa enesisindo kanye nenqubo yesisindo sesisindo isignali enesisindo, futhi kukhipha isibonisi sedatha yesisindo nesiginali yesilawuli.
Okuzenzakalelayo okunesisindo, ukulayishwa kwesikhwama okuzenzakalelayo, ukuthunga izikhwama okuzenzakalelayo, akukho msebenzi wezandla odingekayo;
Isikrini esibonakalayo sesikrini, ukusebenza okulula nokunembile;
Le yunithi yakhiwe ngokugcinwa kwesikhwama, ukuthatha isikhwama kanye nokuhlunga isikhwama, isikhwama sokulayisha isikhwama, okokufaka isikhwama nokuthulula impahla, idivayisi ephethe isikhwama, idivayisi yokuqondisa umlomo wesikhwama, uhlelo lokuhlanza kanye nohlelo lokulawula, njll .;
Inokuzivumelanisa nezimo okubanzi ekupakisheni izikhwama.Umshini wokupakisha usebenzisa indlela yokulayisha isikhwama yezikhwama zokukha, okungukuthi, ukuthatha isikhwama kwisitoreji sesikhwama, ukubeka isikhwama phakathi, ukuthumela isikhwama phambili, ukubeka umlomo wesikhwama, ngaphambili -ukuvula isikhwama, bese ufaka ummese esikhwameni ngesandla samarobhothi ngasikhathi sinye, zombili izinhlangothi zesikhwama ziboshwe ngokubamba komoya ezinhlangothini zombili zomlomo wesikhwama, futhi isikhwama sigcwele ukulayishwa. indlela ayinazo izidingo eziphezulu kusayizi wephutha lesikhwama sokupakisha kanye nekhwalithi yesikhwama uqobo, ngaleyo ndlela kuncishiswe izindleko zokwenza izikhwama;
Ingalo yokulayisha i-manipulator ingalo iqhutshwa yi-servo motor.Iqhathaniswa ne-pneumatic manipulator, inezinzuzo zejubane elisheshayo, ukulayishwa kwesikhwama esizinzile, akunamthelela, nokuphila isikhathi eside;
Kukhona ama-micro-switches amabili lapho kuvulwa khona isikhwama sedivayisi yokuqinisa nokukhipha impahla, esetshenziselwa ukuthola ukuthi ngabe ukuvulwa kwesikhwama kuboshwe ngokuphelele nokuthi ukuvulwa kwesikhwama kuvulwe ngokuphelele. Lokhu kuqinisekisa ukuthi umshini wokupakisha awuhlulelwa kabi futhi ngeke uchithe izinto phansi, okuthuthukisa ukusebenza kahle komshini wokupakisha kanye nemvelo yokusebenza esizeni;
Izakhi zomoya ezinjengama-valve we-solenoid zivaliwe zonke, azivezelwa ukufakwa, futhi zingasetshenziswa ezindaweni ezinothuli, ezingaqinisekisa impilo ende yemishini.
Okuzenzakalelayo okunesisindo, ukulayishwa kwesikhwama okuzenzakalelayo, ukuthunga izikhwama okuzenzakalelayo, akukho msebenzi owenziwayo odingekayo;
Iyunithi yakhiwe ngokulondolozwa kwesikhwama, ukuthatha isikhwama nedivayisi yokuphatha isikhwama, isikhwama sokulayisha isikhwama, okokufaka isikhwama nokuthulula impahla, isikhwama esiphethe idivayisi yokuphusha, insimbi yokuvula isikhwama, uhlelo lokuhlanza kanye nohlelo lokulawula;
It has a adaptability wide to the packaging bag.Umshini wokupakisha usebenzisa indlela yokukha isikhwama, okungukuthi, ukuthatha isikhwama kwisitoreji sesikhwama, ukugxilisa isikhwama, ukuthumela isikhwama phambili, ukubeka umlomo wesikhwama, ukuvula kuqala isikhwama, ukufaka ummese wesikhwama ulayisha i-manipulator esivulekeni sesikhwama, bese uqinisa izinhlangothi ezimbili zomlomo wesikhwama nge-gripper yomoya ezinhlangothini zombili, futhi ekugcineni ulayishe isikhwama. Lolu hlobo lwendlela yokulayisha isikhwama alunazo izidingo eziphakeme kusayizi wephutha ukukhiqizwa kwesikhwama kanye nekhwalithi yesikhwama uqobo Izindleko zokwenza isikhwama esiphansi;
Uma kuqhathaniswa ne-pneumatic manipulator, i-servo motor inezinzuzo zejubane elisheshayo, ukulayishwa kwesikhwama esibushelelezi, akunamthelela nempilo ende yokusebenza;
Kufakwe ama-micro-switch amabili lapho kuvulwa khona okokuxhuma kwesikhwama, okusetshenziselwa ukuthola ukuthi umlomo wesikhwama uboshwe ngokuphelele nokuthi ukuvulwa kwesikhwama kuvulwe ngokuphelele yini.Ukuze kuqinisekiswe ukuthi umshini wokupakisha awuhluleli kabi, hhayi ukuchithela impahla phansi, kuthuthukisa ukusebenza kahle komshini wokupakisha kanye nemvelo yokusebenza esizeni;
I-valve ye-Solenoid nezinye izinto zomoya zivaliwe, azivelwanga ukufakwa, zingasetshenziswa endaweni yothuli, ukuze kuqinisekiswe ukuthi okokusebenza kunempilo ende.
Imodi yokondla / imodi yokuphakela
Ukondla okukodwa (kunganqunywa ngokusho kwendaba)
Kraft iphepha laminated isikhwama, isikhwama nokwelukiweyo (enamathela ifilimu), isikhwama sepulasitiki (ifilimu ukujiya 0.2mm), isikhwama nokwelukiweyo (nge PE isikhwama sepulasitiki ngaphakathi), njll
I-Kraft iphepha lokulaminetha iphepha, isikhwama sepulasitiki (i-film coating), isikhwama sepulasitiki (ubukhulu befilimu u-0.2mm), isikhwama sepulasitiki (i-PE plastic bag ifakiwe), njll
Isikhwama semilomo evulekile somcamelo
Ukucushwa kohlu lokuhlela
Igama / NAME
Umkhiqizo / BRAND
Ubukhosi beLee Lee / iChina
Isikrini sokuthinta / i-HMI
Isikhumulo / Isikhumulo
Ukushintsha ukunikezwa kwamandla / Ukunikezwa kwamandla
Cisha / Shintsha
Ukukhanya kombala kathathu
Langaphambilini Okuzenzakalelayo Powder Bottle Filling Machine Model SPCF-R1-D160
Olandelayo: Imodeli Yomshini We-Multi Lane Sachet Packaging: SPML-240F
25kg isikhwama nokupakisha umshini
umshini wokupakisha wesikhwama osindayo
Okuzenzakalelayo Powder Bottle Ukugcwalisa Machine Model S ...
Okuzenzakalelayo Powder Can Ukugcwalisa Machine (1 umugqa 2f ...
I-Powder Yobisi Ephelile Ingagcwalisa Futhi Seamin ...
I-Auger Filler Model SPAF-50L